Chelmo - သူပိုချစ်လာအောင် ဘယ်လိုကြံရင်ကောင်းမလဲ
ကိုယ့်ရဲ့ရည်းစားသစ်နဲ့ဆက်ဆံရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ထောင်ရေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် စွဲဆောင်မှုရှိသော ခံစားချက်၊ ချီးမွမ်းခံချင်မှုနှင့် ကိုယ့်ကိုလိုအပ်နေမှု စသောအချို့အရာလေးတွေက ခေတ်တွေသာ ပြောင်းလဲသွားပင်မယ့်လည်း မပြောင်းလဲပဲ ကျန်ရှိနေဦးမှာပါ။
အဲဒီလိုခံစားချက်လေးတွေကို မိန်းကလေးတွေသာ လိုချင်တောင့်တကြသည်မဟုတ်၊ ယောက်ျားလေးတွေလည်း အတူတူပါပဲ။ အောက်မှာရေးထားတဲ့အချက် ၆ချက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူ၊ အိမ်ထောင်ဖက်က ပိုပြီးလို့ ချစ်လာစေအောင် ဘယ်လို ပြောဆိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကို ပြောကြည့်မယ်နော်။
၀၁. “နင်က အရမ်းစမတ်ကျတာပဲ။” “နင်က အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတာပဲ”
ယောင်္ကျားလေးတွေက မိန်းကလေတွေလိုပဲ မလုံမလဲဖြစ်တတ်ကြသည်။ သူတို့ဝတ်ဆင်ထားသော အ၀တ်အစားနှင့် လိုက် ဖက်ပါ့မလား၊ အဆင်ပြေပါ့မလား စသည်ဖြင့် အမြဲတွေးနေတတ်တယ်။ သူ့က အခုတလော Gym တွေကိုသွားပြီး လေ့ကျင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုလေးပြောပေးလိုက်ရင်တော့ သူ့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အတွက် အရမ်း ကောင်းတဲ့ အားပေးစကားလေးတစ်ခွန်း ဖြစ်မှာပါ။
၀၂. “နင့်ရဲ့(အသံလေး)ကို အရမ်းသဘောကျတာပဲ” “နင့်ရဲ့(ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုခု)ကို အရမ်းကြိုက်တာပဲ”
တစ်ခါတစ်ရံ အဲဒီလိုလေးပြောပေးလိုက်ရင် အရမ်းထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအချိန်မှာ သတိထားရမှာက ကိုယ့်မျက်နှာပေါ်မှာ သူ့ကိုလှောင်ပြောင်သလို (သို့) ရှက်သလိုလိုပြောတာမျိုးကို မဖြစ်ရန် သတိ ထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ ယောက်ျားလေးတွေက သူတို့ရဲ့ယောက်ျားပီသမှု (ဂုဏ်သိက္ခာ)ကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အပြောအဆို၊ မည်သည့်လုပ်ရပ်အနည်းငယ်ကိုမျှ လက်မခံနိုင်ကြသလို မိန်းကလေးတွေကို သူတို့တွေက အရမ်းကို စွဲဆောင်မှုရှိနေသူများလို့ ထင်စေချင်နေတာပါ။
၀၃. “နင် တခြားသူတွေကို အားပေးစကားပြောနေတာ အရမ်းကြည့်လို့ကောင်းတာပဲ” (သူ့ရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခု အ ပေါ်မှာ ချီးကျူးပေးခြင်း)
ယောင်္ကျားလေးတွေဟာ ဟိုးအရင်အချိန်ကတည်းက ဦးဆောင်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဦးဆောင်ပြီး မလုပ်ခဲ့ရင်တောင်မှ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့အတွက် လုပ်သင့်တဲ့အရာတစ်ခုခုက အခွင့်အရေးတစ်ခုအဖြစ် ရောက်လာတတ်ကြသည်။ ကိုယ်က သူ့လုပ်ရပ်တစ်ခုခုကို ချီးမွှမ်းခြင်းမရှိလျှင်တော့ သူ့လုပ်ရပ်တွေကို ကိုယ်ကမကြိုက်ဘူးလို့ ထင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့လုပ်ရပ်တွေကို ချီးကျူးစကားပြောလေလေ သူကလည်း သင်သဘောကျမယ့် လုပ်ရပ်လေးတွေကို လုပ်လေ လေဖြစ်မှာပါ။
၀၄.“ဟိုမိန်းကလေးကတော့ နင့်ကို ကြည့်နေတယ်”
အဲဒီလိုမျိုးလေးပြောပေးလိုက်ခြင်းသည် သူ့ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကို အားတက်စေဖို့ရန် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးတာကတော့ တခြားကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့ကိုကြည့်နေတာကို မြင်လိုက်ပြီးတော့ သူ့ကို ပြောပြတဲ့အခါမှာလည်း စိုး ရိမ်စိတ်နှင့်မပြောပြဖို့လိုပါတယ်။ အဲဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းဖြင့် သူသည် တခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးဆောင်မှု နောက်ကို မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ကိုယ်ကယုံကြည်မှုအပြည့်အ၀ရှိမှန်း ပြသပေးနေပါတယ်။
ကျွန်မတို့မိန်းကလေးတွေက ချီးမွမ်းခံချင်ကြသလို ယောက်ျားလေးတွေလည်း အတူတူပါပဲ။ ပြီးတော့ သူတို့တွေလည်း တစ်ခါတစ်ရံ ချီးမွမ်းခံထိုက်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူထင်ထားသလို သိပ်မဖြစ်လာပေမယ့် သူ လုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုက မှန်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ စကားများနေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှ ပိုပြီးတော့ ချီးကျူးသင့်ပါတယ်။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ အဲဒီလိုစကားမျိုးကို ပြောရတာဟာ နည်းနည်းတော့ ရှက်သလိုလိုဖြစ်မိမှာတော့ အသေချာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူကတော့ အမှားကိုဝန်ခံရဲတဲ့သူတစ်ယောက်လို့ တွေးမှာပါ။ အဲဒီလိုထင်လိုက်တာလေးက နောက်ဖြစ် လာမယ့် အဆင်မပြေမှုလေးတွေအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။
၀၆. “နင် ငါ့ကို ဒီဟာလေးကူဖြုတ်ပေးနိုင်မလား” (အကူအညီတောင်းခြင်း)
ယောက်ျားလေးတွေက မိန်းကလေးများ၏အားကိုးမှုကို အလွန်ရချင်သူများပါ။ ဤအယူအဆသည် အစဉ်အလာတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေပြီနော်။ ယောက်ျားလေးများကတော့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကူညီလိုက်ရလျှင် သူတို့ ကိုယ်သူတို့ အရမ်းအထင်ကြီးသွားတတ်ကြပြီး တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ အရမ်းလွယ် ကူနေသည့် အရာတွေကို ယောက်ျားလေးများအား သွားမလုပ်ခိုင်းသင့်ပါဘူး။ သို့ပေမယ့်လည်း အမှန်တကယ် အကူအညီ လိုအပ်နေပြီဆိုလျှင်တော့ သူတို့ဆီက အကူအညီသွားတောင်းလိုက်ပါ။ သူတို့က ပျော်ပျော်ကြီးကူညီပေးမှာပါ။